Shikhar Post » यी हुन् संसारकै सुन्दर २० देश, जुन सूचिमा नेपाल परेन
यी हुन् संसारकै सुन्दर २० देश, जुन सूचिमा नेपाल परेन
नेपाल किन परेन ?
काठमाडौं । तपाईँलाई नेपाल कस्तो लाग्छ? ‘संसारकै सबैभन्दा सुन्दर’ हैन त? तर, अन्तराष्ट्रिय पर्यटकको आँखामा नेपालको सौन्दर्य कम प्राथमिकतामा पर्दै जान थालेको देखिएको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको संसारका २० सुन्दर देशहरूको सूचीमा नेपाल पर्न सकेन ।
बेलायतको चर्चित ट्राभल गाइड रफ गाइड्सले सार्वजनिक गरेको यस्तो सूचि लाखौं पाठक र घुमन्तेहरूको मतबाट तय भएको हो । दक्षिण एसियाबाट छिमेकी मुलुक भारतको नाम १३ औं स्थानमा पर्दा नेपालको नाम भने २० भित्र पनि पर्न सकेन । एसियाबाट इन्डोनेसिया छैटों स्थानमा छ भने भियतनाम २० औं स्थानमा ।
चर्चित अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यम टाइम, बिजनेश इन्साइडर, गार्जियन लगायतले यो सूचीलाई प्राथमिकता साथ स्थान दिएका छन् ।
नेपाल किन परेन?
रफ गाइड्सकै सन २०१४ को ‘वेस्ट प्लेसेज टु भिजिट इन २०१४’ सूचिमा नेपाल ‘बेस्ट भ्यालु डेस्टिनेसनमा’ १ नम्बरमा परेको नेपाल यसपाली भने २० देशभित्र पनि पर्न सकेन् । पछिल्लो समय नेपाल पश्चिमा पर्यटक भन्दा छिमेकी भारत र चीनका पर्यटक तान्नमा केन्द्रित छ । जसले गर्दा पश्चिमा घुमन्ते र सञ्चारमाध्यबाट छायाँमा पर्दै गएको हुन सक्छ ।
यस्ता छन् सबैभन्दा सुन्दर देशहरू:
आकर्षक ताल तलैया, ऐतिहासिक महलहरू, जंगल छेउका रमणीय समुद्री तटहरूको देश स्कटल्यान्डले सन्सारकै सुन्दर देशको रूपमा भोट पाएको छ । राजधानी इडिनबर्ग सहर र लस्कनटाय बिच स्कटल्यान्डका मुख्य आकर्षण हुन । यहाँ सबैभन्दा बढि अमेरिकी पर्यटक आउने गरेको तथ्यांक छ । २ लाख स्कटिस नागरिकले यसबाट रोजागारी पाएका छन् ।
विश्व सम्पदा सूचीमा १५ वटा सम्पदा पर्ने क्यानडामा प्राकृतिक विविधता पनि उत्तिकै छ । भानकोभर, क्युबिक, मन्ट्र्याल जस्ता सहर पर्यटकका लागि चर्चित छन् । चर्चित झरना नियग्रा फल्स पनि क्यानडा र अमेरिकाको सिमानामा पर्छ । क्यानडा घुम्ने सबैभन्दा बढि पर्यटक पनि अमेरिकी नै हुन् ।
पहाडी देश न्यूजिल्याण्ड घुमन्तेको तेस्रो छनौटमा परेको छ । न्युजिल्यान्डका हरिया लोभलाग्दा पहाड, गहिरा गल्छी र सुन्दर पखेराले विश्व सुन्दरताको तेस्रो स्थान पाएको छ । देशको करिब ४ प्रतिशत जिडिपी मा पर्यटनको योगदान छ । छिमेकी देश भएर पनि होला यहाँ पुग्ने सबैभन्दा बढि पर्यटक अष्ट्रेलियाका छन् ।
युरोपेली संस्कृतिको एउटा केन्द्रको रूपमा परिचित इटालीमा खाना, संस्कृती, भाषा र साना साना सहरका फरक विशेषता पर्यटक लोभ्याउने आधार हुन् । ऐतिहासिक संरचनामा नयाँ शैलीले मोजमस्ती गर्ने उदेश्यले यहाँ धेरैजसो पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । इटालीमा जर्मन नागरिकहरू सबैभन्दा बढि घुम्छन् ।
५. दक्षिण अफ्रिका
जंगल, बन्यजन्तु, पहाडका कोप्चेरामा पसेका समुद्री तटहरू र खानाले दक्षिण अफ्रिकामा पर्यटक तान्ने गरेको छ । देशको १० प्रतिशत रोजगारी पर्यटनमा निर्भर छ । ८ वटा सम्पदा विश्व सम्पदा सूचिमा परेका छन् ।
९. संयुक्त राज्य अमेरिका